The Genius Marketing an'i Jim Irsay | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 3, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Robby Slaughter
Ny alahady dia resin'ny Indianapolis Colts ny Tennessee Titans ho lasa Tompondakan'ny AFC South. Talohan'ny lalao, na izany aza, ny tompon'ny Colts Jim Irsay dia nanao fampielezan-kevitra mamirapiratra tanteraka tao amin'ny Twitter.
Raha tsy maharaka ny antsipiriany ianao dia andao jerena ny bitsika nataon'i Irsay manomboka amin'ny 31 Desambra:
HANDRAY PRIUS SY $ 4K — Amin'ny 1:15 tolakandro izao dia hisy Prius mainty mijanona eo amin'ny plaza avaratra ivelan'ny kianjan'i Lucas Oil…
HANDEVITRA PRIUS SY $ 4K — Ny mpandray anjara dia tokony ho 18 yrs no ho miakatra AND manaraka ny @jimirsay ao amin'ny Twitter.com…
HANDEVITRA PRIUS SY $ 4K — Fidirana iray isaky ny olona, ​​fampidirana maro no manilika anao (tsy maneso)!…
HANDEVITRA PRIOSY SY $ 4K — Amin'ny 1 ora tolakandro izao dia handefa fanontaniana iray aho. Azonao atao ny miditra amin'ny alàlan'ny bitsika ny valinteninao.
MBA HANDRAY PRIOSY SY $ 4K — TSY maintsy misy ny bitsikao ao amin'ny bitsikao hita ao amin'ny fahazoan-dàlana hitondra anao ARY ampidiro ao @ jimirsay ARY # gocolts.
Andao hatsahatra ny tombony miharihary amin'ity karazana fampiroboroboana ity. Isaky ny manome loka sarobidy ianao dia mamokatra buzz sy liana marobe amin'ny marika. Manamafy ny tsy fivadihana ianao. Mampifaly olona maro ianao, ary olona iray mety faly tokoa. Matetika dia lehibe ny fifaninanana.
Saingy ny ekipa mpivarotra Colts dia nanao zavatra tena namirapiratra tamin'ity fampielezan-kevitra ity, zavatra izay mety ho lafo ary handany fotoana raha tsy izany: Namory ny lisitr'ireo mpankafy an'i Colts sy Twitter izy ireo.
Saintsaino izany! Ny marketing lehibe dia mitaky tahiry madio sy marina ary mifandraika amin'ny referansa rehetra. Ny fivoaran'ny teknolojia vaovao toy ny Twitter dia midika fa misy fomba vaovao hahatratrarana ny olona, ​​nefa miaraka amin'izay dia ilaina tokoa ny mampifandray ireo mpankafy amin'ny kaonty Twitter.
Topazo maso, ohatra, amin'ny mpampiasa Twitter @ DeadStroke96. Azonao atao ny milaza azy fa mpankafy NFL goavambe izy amin'ny famakiana fotsiny ireo Tweet-ny. Saingy tsy misy fomba hahafantarana azy, satria tsy nanome anarana tao amin'ny piraofilina Twitter ity mpampiasa ity. Raha ny marina dia maro ny olona no mampiasa solonanarana, anarana voalohany na anarana nick amin'ny Internet. Tsy misy fomba mora hifandraisana amin'ny data rehetra ofisialy mety anananao amin'ny olona iray, toy ny tantaran'ny fividianana, tahiry marketing, sns.
Saingy izao, fantatr'i Jim Irsay (sy ny olon-drehetra) fa @ DeadStroke96 dia George Ketchman. Toa olona an-jatony - raha tsy an'arivony - no nanome an-tsitrapo ny angon-drakitra madio sy marina amin'ity fifaninanana ity. Mandehana mankany amin'ny Fikarohana Twitter hahitanao manokana. (Azonao atao ny mitady ny "#gocolts @jimirsay footballs" hanenjana ny valiny.)
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra mampitombo ny vokatra dia ny famindrana ny asa amin'ny olon-kafa. Ny Colts dia mety nandany ora maro hanarahana ny mpanaraka an'i Jim Irsay, nijery ny mombamomba azy ireo sy ny siokany mba hanandramana sy hamantarana ny anarana feno ara-dalàna ananany. Na, afaka mihazakazaka amin'ny fifaninanana izay mety hataony ihany izy ireo, ary mamela ny olona hanao ny asa samirery.
Asa tsara, Jim Irsay sy ny ekipan'ny marketing Colts!
Tags: zanajim irsay-barotra
Janoary 3, 2011 amin'ny 3:20 PM
Fa…. $30,000 ve izany? Ary hanao zavatra amin'ny angon-drakitra ve izy ireo?
Janoary 3, 2011 amin'ny 5:24 PM
Hevitra tsara izany…fa inona ny ROI? Tamin'ny voalohany namaky bitsika momba ny fampiroboroboana ny asabotsy aho dia nanana mpanaraka 18,000+ teo ho eo i @jimirsay. Vao avy nanamarina aho dia 20,000+ izao. Nahatratra roa arivo mpanaraka vaovao ve ny vidiny?
Janoary 3, 2011 amin'ny 6:11 PM
Misalasala aho fa efa manakaiky ny $30k ny vidiny. Fantatray fa farafahakeliny $ 4k ny vola. Mety ho azon'izy ireo tsy misy vidiny mivantana ilay fiara ho takalon'ny varotra ara-barotra.
Raha mampiasa ny angon-drakitra ny Colts, dia eny, mitentina $4,000 izany. Ekipa be dia be herinandro maromaro vao afaka mifandray amin'ireo mpanaraka an'i Irsay rehetra amin'ny olona tena izy, ary tsy handrakotra ireo mpisera Twitter maro izay tsy azonao tsoahina ny mombamomba azy.
Mazava ho azy fa misy fampahalalana iray hafa: Na iza na iza dia afaka mahazo ity lisitra ity izao, fa tsy ny Colts ihany. Tokony hilaza zavatra hafa aminao momba ity fanentanana ity izany.
Janoary 3, 2011 amin'ny 10:37 PM
Tsy maintsy ampidirinao koa ny vidin'ny 'ekipa lehibe' amin'izay. Lazao fa afaka miresaka olona 1 isaky ny 3 minitra ianao, na 20 isan'ora. Ho an'ny mpanaraka 20,000 dia mijery ora fiasana 1000 ianao. Atsipazo amin'ny toeran'ny fidirana angona $10/ora izany, ary ao anatin'ny $10,000 hafa ianao amin'ny vidiny. Ankehitriny ianao dia miverina amin'ny $14,000 raha maimaim-poana ny fiara, $30,000+ raha misy fihenam-bidy.
(Oh, ary tsara kokoa ny manomboka azy ireo anio alohan'ny hamafa ny search.twitter.com ao anatin'ny herinandro eo ho eo hahahaha! 🙂)
Heveriko fa LEHIBE i Irsay amin'ny fananganana buzz, mampiresaka ny olona, ​​sns. Ary heveriko fa tiantsika rehetra ny hampiasa ny angon-drakitra araka izay azo atao sy tokony ho izy, saingy tsy mieritreritra aho fa mitranga izany.
Inona no tena tanjony? Asao ny olona hiresaka sy hientanentana momba ny Colts (sy izy), ary tohizo ny fampisehoana fa manam-bola be izy ary afaka manome zavatra. Tafita tamin’izany ve izy? Ya.
Janoary 3, 2011 amin'ny 10:22 PM
Ny ROI dia tsy ao amin'ny mpanaraka Twitter Steve ihany. Tsy misy fomba ahafahanao mandrefy ROI amin'ny zavatra mitete toy izao. Tsy momba ny isan'ny mpanaraka an'i Irsay ny momba ny endrik'ilay fikambanana mahazo laza manerana ny tanàna. Heck saika mendrika izany ho an'ny pub rehetra azony avy amin'ny geeks marketing toa antsika. Lany mialoha ny lalao ka ankoatra ny varotra varotra dia tsy manana toerana hanatsarana ny ROI ny Colts isaky ny miteny.
Jan 4, 2011 ao amin'ny 2: 07 AM
Afaka mahazo fidiram-bola amin'ny alalan'ny tapakila ny Colts… saingy somary azo avy amin'ny fanohanana. Mandoa isa be ny mpanohana. Tsy toy ny orinasa mahazatra, ny mpankafy ny ekipa fanatanjahan-tena dia mijanona. Noho izany dia mety misy fanontaniana tsara kokoa - inona no sandan'ny androm-piainan'ny mpankafy Colts…. ary i Jim Irsay ve nanao mpankafy Colts tamin'ny fanaovana izany? Heveriko fa mety manana izany izy. Leon'ny ekipa mandray foana ny olona… fihetsika mahafinaritra ny mamerina kely izany.
joe mpanao kiraro
Janoary 11, 2011 amin'ny 2:45 PM
Tsy momba ny ROI, ny mpanaraka, na ny vidiny. Mikasika ny firohondrohon'ny egomaniac ataon'ny miliaridera manana vola be noho ny saina. Ny tiako tenenina dia…1M no nandoany ny gitara an'i Jerry Garcia. Tena mihevitra ve ianao fa miahiahy momba ny $30k izy?
Jan 12, 2011 ao amin'ny 3: 45 AM
Na dia manaiky aza aho fa tsy misy iraisan'ny vola sy ny saina, tsy azoko antoka fa manaiky aho fa i Irsay dia egomaniacal. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, nanao izay rehetra azo atao i Irsay mba hialana amin'ny jiro. Miara-miasa amin'ny sasany manana fifandraisana be dia be aminy aho ary nilaza tamiko izy ireo fa lehilahy mahafinaritra izy ary tena malemy fo. Raha manao fikarohana ianao dia ho hitanao fa mitazona asa soa maro eto Indiana izy.
Jan 12, 2011 ao amin'ny 2: 45 AM
iza no tena nahazo ny fiara?
Janoary 3, 2011 amin'ny 3:32 PM
Miaraka amin'i Brad aho amin'ity, karazana. Robby dia mihevitra fa ny Colts dia hampiasa ny vaovao. Misalasala aho amin'ny tsara indrindra amin'io lafiny io satria manana ny iray amin'ireo ratsy indrindra izy ireo (satria saika tsy misy) eo amin'ny sehatra sosialy ho an'ny ekipa pro. Amin'izao fotoana izao, ny mpankafy azy dia manao be dia be amin'ny tolo-kevitr'izy ireo ho azy ireo amin'ny Internet ary tsy maninona izany, saingy izao i Irsay dia mibitsika ny fahatsiarovan-tenany ary manome tapakila sy fiara tsy midika fa efa hendry ny fikambanana. Ny mari-pamantarana amin'ny fifaninanana dia manondro olona iray manana fahalalana momba ny Twitter miditra ao an-tsofin'i Jim. Angamba i Doug sy ny namany Pat Coyle dia afaka miresaka amin'ny Colts ho toy ny fikambanana tsara kokoa noho izaho. Ny sanda hafa amin'izany dia ho an'ireo mpanohana mety ho avy. Nahazo pub lehibe i Toyota tamin'izany, na dia afaka nahazo fanampiana bebe kokoa tamin'i Jim sy ny mpivarotra teo an-toerana aza izy ireo dia mety tsy nampiroborobo izany ary nampiasa izany araka izay vitany. Ny orinasa savvy ara-tsosialy mitady hiara-miasa amin'ny Colts dia hilelaka ny hodiny amin'ny fifanarahana tahaka izao. Ny vidin'ny Colts dia mety tsy misy dikany ho an'ny fiara na fihenam-bidy be noho ny fiaraha-miasa amin'ny Toyotas amin'ny ekipa (mety ho latsaky ny $ 20k ny fiara raha nandoa izany izy ireo) Ny Colts amin'ny maha-ekipa azy dia ho nahazo hery bebe kokoa raha toa ka be ny loka. narafitra manodidina azy ireo sy ny vokatra azony nefa tsy maharary ny fampahafantarana. Zava-dehibe ny mahita ny bitsikan'i Irsay tsy voasivana fa amin'ny lafiny ara-barotra dia mbola mahita fahafahana sy toerana ho fanatsarana aho.
Janoary 3, 2011 amin'ny 6:07 PM
Na angamba i Robby dia mafy ny lelany amin'ny takolany.
Raha eny, nilalao tsara tompoko.
Janoary 3, 2011 amin'ny 10:24 PM
Janoary 11, 2011 amin'ny 2:43 PM
Miliardaire izy. Mandany 30 arivo dolara amin'ny fialany amin'ny fandriana izy. Raha ny tena marina, tsy ny vola no resahina. Momba ny ego.
Jan 4, 2011 ao amin'ny 4: 24 AM
Mamirapiratra tsara hoy aho.
Jan 4, 2011 ao amin'ny 4: 26 AM
Araka ny fitsipiky ny fanomezana fiara/vola an'i Jim Irsay, ny bitsika dia mila mampiditra ny anaranao araka izay hita ao amin'ny fahazoan-dalana mamily anao. Na dia mety ho an'ny fitrandrahana angon-drakitra aza izany, heveriko fa natao hisorohana ny hosoka izany. Nanana fetra tokana ho an'ny olona iray izy; tsy nahafeno fepetra tamin'ny bitsika marobe ianao. Ny fitsipika "anarana feno" dia nanakivy ny vinavinan'ny olona manana kaonty Twitter marobe.
Janoary 11, 2011 amin'ny 2:41 PM
Tsy manana antony hinoana aho fa misy fahaiza-miaina ao ambadiky ny fampiroboroboana. Loza mahafaly, fa tsy manam-pahaizana.
Janoary 15, 2011 amin'ny 6:54 PM
Manetry tena foana rehefa misy olona malaza (@jimirsay) miditra ao amin'ny Twitter ary mihoatra ny isan'ny mpanaraka izay naharitra taona maro vao nanangona… tao anatin'ny herinandro vitsivitsy!